I-China iFlorfenicol Sodium Succinate Imveliso kunye neMveliso | Iqela leqela leTypt
UFlorfenicol weSodium Succinate
Igama lemveliso: UFlorfenicol sodium faidi
Umgubo omhlophe okanye omhlophe-njenge-crystalline powder, awunantlonelo kwaye awunambeko, xa umswakama womoya uphakamileyo weemveliso Le inyibilikiswa kancinci kwi-acetone, ethanol, inyibilika lula emanzini, iqulethe i-florfenicol sodium supplement ayikho ngaphantsi kwe-95%.
1. IFlorfenicol sodium desidi yenza iFlorfenicol inyibilike ku-300mg / ml kwaye yongezwe ama-400.
2. IFlorfenicol isodium ncedisa yenza iFlorfenicol inqanaba lokuchithakala ngokukhawuleza ama-200, ngaphandle kokudibana, kunyibilike amanzi ngokukhawuleza.
3. IFlorfenicol sodium desidi yiFlorfenicol derivatives, emzimbeni yi-enzyme egalelwe ngokufanelekileyo kwi-florfenicol kunye nokuhamba kwegazi okusebenzayo kwexesha elide.
4. Ayifuni ukubandakanyeka kwe-organic solvent kungasetyenziselwa kulawulo lweklinikhi, ukunqanda iziphumo ebezingalunganga zokusebenzisa i-organ solvent (ukuphucula ukhuseleko lwechiza, ukunciphisa intsalela).
Le mveliso yiVurfenicol derivatives, ngokungqinelana nomgaqo woyilo weproduction uyenze yahluka-hlukana ne-gram-positive kunye ne-gram-negative bacteria kwaye inenxaxheba kwi-mycoplasma.
Inkqubo ye-antibacterial ikunye ne-50S ribosomal subunit, kwaye inhibis enzyme ephambili efunekayo ekuqulunqweni kweprotein - ipeptidyl yokudlulisela, eya kuthintela ngokuthe ngqo ukubethelelwa kwe-aminoacyl-tRNA ekubambeni kwii-receptors kwikhonkco le-ribosome inhibitory peptide eyandisiweyo ishiya iproteni yebhaktiriya ayinakwenziwa . Le mveliso ayizukonyusa kuphela i-soluble yayo yamanzi, kunye nenkqubo yomlomo kunye neyenaliti ekuphulukaneni ne-vivo, emva kokuba i-enzyme metabolism emzimbeni ukubola kwii-esters kunye ne-florfenicol ester yahlula ukumelana ne-bacterium. Ukugxilwa kweFlorfenicol, dlala iziyobisi ezisebenzayo kakhulu ekusebenzeni kwinto ephilayo, inani elincinci, ngokukhawuleza, ixesha elide lobomi, ukugxininiswa kweplasma ephezulu, ixesha elide lokugcina uxinzelelo lwe-plasma. Ngokuyintloko ziintso zentso.
Isetyenziswe kwinkukhu E. isifo se-coli kunye neSerositis kunye neentlanzi zibulala isalmon Aeromonas, Vibrio treillarum yeebacteria ezibuthakathaka kwiinkomo, iihagu, intsholongwane yamathumbu enkukhu kunye neMycoplasma ebangelwa kukuphefumla okungapheliyo.
Inkukhu: isiselo esidityanisiweyo samanzi ayi-100L i-3.5-4g, imfuyo, ngeekhilogremu ubunzima bomzimba 20-25mg, kube kanye ngemini kwaye usebenzise iintsuku ezintathu. I-IM: iinkukhu, iihagu, iinkomo kunye nexesha leekhilogremu ubunzima bomzimba ezili-15- 20mg, qho nge-48h ngexesha. Sebenzisa amaxesha amabini.
Okulandelayo: I-Tiamulin Hydrogen Fumarate